ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Covid 19 တရုတ်ပြည်တွင်းပျံ့နှံ့နေတာကို တားဆီးနိုင်ဖို့ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ရွှေလီမြို့ အာဏာပိုင်တွေက တလလောက်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ မြန်မာ- တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကြား မူဆယ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်က ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မြန်မာကုန်သည်တွေဘက်က အခြေအနေ စောင့်ကြည့်နေတာကြောင့် ကုန်သွယ်မှုက ပုံမှန်အခြေအနေတော့ ရာနှုန်းပြည့် ပြန်မရောက်သေးပါဘူး။ ဒီနေ့ မူဆယ်အခြေအနေကို ကုန်သည်တချို့ကို မေးမြန်းပြီး ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် ကိုဇော်ထက်က ပေးပို့ထားပါတယ်။
အခုလို ရွှေလီမြို့တွင်း အသွားအလာ တားဆီးပိတ်ပင်တာတွေ ဖြေလျှော့လိုက်တာဟာ တရုတ်အစိုးရက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ဖို့ လမ်းနဲ့ အများပိုင် နေရာတွေကို ခေတ္တပိတ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံး ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုံမှန်အခြေအနေ အထိတော့ မရောက်သေးဘူးလို့ မူဆယ်- နမ့်ခမ်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းက ကုန်သည်တွေက ခန့်မှန်းပါတယ်။
“တချို့ နေရာတော်တော်များများကတော့ လမ်းတွေ၊ ရောင်းဝယ်မှုတွေ ပြန်ဖွင့်ပေးတယ်ဗျ။ ဒီရောဂါမဖြစ်ခင် အနေအထားနဲ့ တွက်ရရင်တော့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အရောင်းအဝယ် ပြန်ဖြစ်လာပြီးပေါ့။ အနည်းအကျဉ်းတော့ လာနေကြပါပြီ၊ ဟိုလို အင်တိုက်အားတိုက်နဲ့တော့ သိပ်မသွားကြသေးဘူး။”
မူဆယ် နယ်စပ်စခန်းက သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သက်ဦး ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပေမဲ့လည်း နှစ်ဘက်အစိုးရ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ တရားဝင်နယ်စပ်ဂိတ်ကနေ ဝင်ထွက်သွားလာသူတွေကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေး၊ မှတ်တမ်းယူတာတွေ လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မူဆယ်နမ့်ခမ်းကုန်သည် အသင်းဝင်ဖြစ်သလို၊ မူဆယ် ဆန်ကုန်သည်များအသင်းရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းသိန်းက လက်ရှိအခြေအနေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“အတော်အသင့် ပြန်ဖွင့်တယ်၊ ပြန်ဖွင့်ပြီးနည်းနည်း လှုပ်ရှားတယ်။ ဗမာပြည်က အလုပ်သမားတွေလည်း အခု ရွှေလီကို စပြီးဝင်နေပြီ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်။ အရင်ထိန်းချုပ်ထားတာတွေ နည်းနည်း လျော့ပေးလိုက်တယ်။ လမ်းတွေ ပိတ်ထားတာတို့၊ ရပ်ကွက်တခုနဲ့တခု မကူးရတာတို့။ ဒါပေမဲ့ အဝင်အထွက်တွေမှာ အဖျားတိုင်းတယ်၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွေဖြည့်ရတယ်။”
ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်မှာ မြန်မာဘက်က ဆန်နဲ့ ဆန်ကွဲကား အစီးရေ ၄၀၊ သခွားမွှေးအစီး ၁၂၀၊ ဖရဲ အစီး ၁၃၀ နဲ့ ပဲတီစိမ်းတွေ တရုတ်ပြည်ဘက် တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ သကြားကားတွေကတော့ မှောင်ခိုလမ်းကနေ ၁၅စီးလောက် ထွက်ပါတယ်။ ရေထွက်ကုန်ကတော့ တရုတ်ပြည်တွင်း အခြေအနေတွေ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာမှ တင်ပို့ဖို့ ကုန်သည်တွေက ဆန္ဒရှိပါတယ်။
တရုတ်ဘက်ကတော့ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း၊ စားသောက်ကုန်နဲ့ ဆေးဝါးတွေ ဒီနေ့ ပြန်ဝင်လာပါတယ်။ ရေထွက်ကုန်ကတော့ တရုတ်ပြည်တွင်း အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရဦးမယ်လို့ ကုန်သည်တွေက ပြောပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ အခြေနေတွေကြောင့် ဆန်နဲ့ ရေထွက်ကုန်အပါအဝင် ရာသီပေါ်သီးနှံတွေ ခူးဆွတ်၊ တင်ပို့တာ အရဲစွန့် မလုပ်ကြဖို့ မူဆယ် ကုန်စည်ဒိုင်တွေက ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်မှာ အသီးသီးသတင်းထုတ်ပြန် သတိပေးခဲ့ကြသလို ဖရဲစိုက်ခင်း ဧက ၁၀၀၀ လောက် ခူးဆွတ်ချိန်ကြာမြင့်ခဲ့လို့ ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဖရဲသခွားမွေး စိုက်ပျိုးထုတ်လူပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးလွင်က ပြောပါတယ်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှာ နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၂၀၀ ကျော် ( ၃၂၆၁. ၅၉၁) တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးကရတဲ့ ရေထွက်ကုန်ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀ ကျော် ( ၇၃၂.၁၅၆) ရှိပါတယ်။ မူဆယ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏာဟာ အခြားကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အများဆုံးဖြစ်ပြီး မြန်မာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းအရ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀၀ ( ပို့ကုန် ၃၁၅၆. ၄၁၉ + သွင်းကုန် ၁၇၆၁.၅၅၇) နီးပါးရှိပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ Covid 19 တရုတျပွညျတှငျးပြံ့နှံ့နတောကို တားဆီးနိုငျဖို့ ယူနနျပွညျနယျ၊ ရှလေီမွို့ အာဏာပိုငျတှကေ တလလောကျပိတျထားခဲ့တဲ့ မွနျမာ- တရုတျ နှဈနိုငျငံကွား မူဆယျကုနျသှယျရေးဂိတျတှကေို ဖဖေျောဝါရီ ၂၃ ရကျက ပွနျဖှငျ့ပေးလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး မွနျမာကုနျသညျတှဘေကျက အခွအေနေ စောငျ့ကွညျ့နတောကွောငျ့ ကုနျသှယျမှုက ပုံမှနျအခွအေနတေော့ ရာနှုနျးပွညျ့ ပွနျမရောကျသေးပါဘူး။ ဒီနေ့ မူဆယျအခွအေနကေို ကုနျသညျတခြို့ကို မေးမွနျးပွီး ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး သတငျးထောကျ ကိုဇျောထကျက ပေးပို့ထားပါတယျ။
အခုလို ရှလေီမွို့တှငျး အသှားအလာ တားဆီးပိတျပငျတာတှေ ဖွလြှေော့လိုကျတာဟာ တရုတျအစိုးရက ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈထိနျးခြုပျဖို့ လမျးနဲ့ အမြားပိုငျ နရောတှကေို ခတ်ေတပိတျကွောငျး ဇနျနဝါရီ ၂၆ ရကျ ကွညောခကျြထုတျပွီးနောကျပိုငျး ပထမဆုံး ပွနျခှငျ့ပွုလိုကျတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပုံမှနျအခွအေနေ အထိတော့ မရောကျသေးဘူးလို့ မူဆယျ- နမျ့ခမျး နယျစပျကုနျသှယျရေးစခနျးက ကုနျသညျတှကေ ခနျ့မှနျးပါတယျ။
“တခြို့ နရောတျောတျောမြားမြားကတော့ လမျးတှေ၊ ရောငျးဝယျမှုတှေ ပွနျဖှငျ့ပေးတယျဗြ။ ဒီရောဂါမဖွဈခငျ အနအေထားနဲ့ တှကျရရငျတော့ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ အရောငျးအဝယျ ပွနျဖွဈလာပွီးပေါ့။ အနညျးအကဉျြးတော့ လာနကွေပါပွီ၊ ဟိုလို အငျတိုကျအားတိုကျနဲ့တော့ သိပျမသှားကွသေးဘူး။”
မူဆယျ နယျစပျစခနျးက သဈသီးဝလံကုနျစညျဒိုငျ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဦးအောငျသကျဦး ပွောသှားတာ ဖွဈပါတယျ။
အခုလိုပွနျဖှငျ့ပေးလိုကျပမေဲ့လညျး နှဈဘကျအစိုးရ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး တာဝနျရှိသူတှကေတော့ တရားဝငျနယျစပျဂိတျကနေ ဝငျထှကျသှားလာသူတှကေို ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရမှု ရှိ၊ မရှိ စဈဆေး၊ မှတျတမျးယူတာတှေ လုပျနဆေဲဖွဈပါတယျ။ မူဆယျနမျ့ခမျးကုနျသညျ အသငျးဝငျဖွဈသလို၊ မူဆယျ ဆနျကုနျသညျမြားအသငျးရဲ့ ဒုဥက်ကဋ်ဌလညျးဖွဈတဲ့ ဦးမငျးသိနျးက လကျရှိအခွအေနကေို အခုလို ပွောပွပါတယျ။
“အတျောအသငျ့ ပွနျဖှငျ့တယျ၊ ပွနျဖှငျ့ပွီးနညျးနညျး လှုပျရှားတယျ။ ဗမာပွညျက အလုပျသမားတှလေညျး အခု ရှလေီကို စပွီးဝငျနပွေီ အလုပျလုပျဖို့အတှကျ။ အရငျထိနျးခြုပျထားတာတှေ နညျးနညျး လြော့ပေးလိုကျတယျ။ လမျးတှေ ပိတျထားတာတို့၊ ရပျကှကျတခုနဲ့တခု မကူးရတာတို့။ ဒါပမေဲ့ အဝငျအထှကျတှမှော အဖြားတိုငျးတယျ၊ ကိုယျရေးရာဇဝငျတှဖွေညျ့ရတယျ။”
ဒီနေ့ ဖဖေျောဝါရီ ၂၄ ရကျမှာ မွနျမာဘကျက ဆနျနဲ့ ဆနျကှဲကား အစီးရေ ၄၀၊ သခှားမှေးအစီး ၁၂၀၊ ဖရဲ အစီး ၁၃၀ နဲ့ ပဲတီစိမျးတှေ တရုတျပွညျဘကျ တငျပို့ခဲ့ပါတယျ။ သကွားကားတှကေတော့ မှောငျခိုလမျးကနေ ၁၅စီးလောကျ ထှကျပါတယျ။ ရထှေကျကုနျကတော့ တရုတျပွညျတှငျး အခွအေနတှေေ ပုံမှနျပွနျဖွဈလာမှ တငျပို့ဖို့ ကုနျသညျတှကေ ဆန်ဒရှိပါတယျ။
တရုတျဘကျကတော့ အိမျဆောကျပစ်စညျး၊ စားသောကျကုနျနဲ့ ဆေးဝါးတှေ ဒီနေ့ ပွနျဝငျလာပါတယျ။ ရထှေကျကုနျကတော့ တရုတျပွညျတှငျး အခွအေနကေို စောငျ့ကွညျ့ရဦးမယျလို့ ကုနျသညျတှကေ ပွောပါတယျ။
တရုတျပွညျမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ ကူးစကျပြံ့နှံ့နတေဲ့ အခွနေတှေကွေောငျ့ ဆနျနဲ့ ရထှေကျကုနျအပါအဝငျ ရာသီပျေါသီးနှံတှေ ခူးဆှတျ၊ တငျပို့တာ အရဲစှနျ့ မလုပျကွဖို့ မူဆယျ ကုနျစညျဒိုငျတှကေ ဇနျနဝါရီ ၂၆ ရကျမှာ အသီးသီးသတငျးထုတျပွနျ သတိပေးခဲ့ကွသလို ဖရဲစိုကျခငျး ဧက ၁၀၀၀ လောကျ ခူးဆှတျခြိနျကွာမွငျ့ခဲ့လို့ ပကျြစီးမှုရှိခဲ့ကွောငျး စဈကိုငျးတိုငျး ဖရဲသခှားမှေး စိုကျပြိုးထုတျလူပျ တငျပို့ရောငျးခသြူမြားအသငျး ဥက်ကဋ်ဌ ဦးစိုးလှငျက ပွောပါတယျ။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှာ နယျစပျဂိတျတှကေနေ လယျယာထှကျကုနျပစ်စညျး အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၃၂၀၀ ကြျော ( ၃၂၆၁. ၅၉၁) တငျပို့နိုငျခဲ့ပါတယျ။ နယျစပျ ကုနျသှယျရေးကရတဲ့ ရထှေကျကုနျဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၇၀၀ ကြျော ( ၇၃၂.၁၅၆) ရှိပါတယျ။ မူဆယျနယျစပျ ကုနျသှယျမှု ပမာဏာဟာ အခွားကုနျသှယျရေးစခနျးတှနေဲ့ ယှဉျရငျ အမြားဆုံးဖွဈပွီး မွနျမာကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ တရားဝငျကိနျးဂဏနျးအရ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ်ဍာနှဈမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၅၀၀၀ ( ပို့ကုနျ ၃၁၅၆. ၄၁၉ + သှငျးကုနျ ၁၇၆၁.၅၅၇) နီးပါးရှိပါတယျ။